रिपोर्टसोमबार, २० भाद्र , २०७३
तस्वीर: सञ्जीव शर्मा
छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग राखेर वीर अस्पतालको आईसीयूमा अनशनमा बसेकी गंगामायाको स्वास्थ्य ज्यादै नाजुक बनिसके पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
वीर अस्पतालको आईसीयूबाट न्यायको लागि गुहार मागिरहेकी ५५ वर्षीया गंगामाया अधिकारी जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् तर, उनको आवाज सुनिदिने कोही छैन । उनको माग हो– आफ्नो कान्छो छोराका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ ।
२०६९ सालबाट अनशन शुरू गरेकी गंगामायाका माग अहिलेसम्मका चार प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताले पूरा गर्छौं भने, तर गरेनन् । पटक–पटक अनशन बस्ने र तोडाउने शृंखला चल्यो तर, गोरखाका यी सामान्य गृहस्थमाथि सरकारले धोका दिइरह्यो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत सरकारले हत्याका अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेपछि गंगामाया पछिल्लो पटक २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छिन् । उनका पति नन्दप्रसादको अनशन शुरू गरेको ३३२औं दिन (६ असोज २०७१) मा निधन भइसकेको छ । उनको शव अझै पनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ ।
माग सबैलाई थाहा छ
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले वीर अस्पतालको पुरानो आईसीयू बेड नं.२६ मा रहेकी गंगामायालाई १६ भदौमा भेटेर उनका मागहरूबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल चलाउने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले आफ्ना कुरा सुन्न कोही बाँकी नरहेको हिमाल लाई बताइन् ।
“मेरा माग थाहा नपाएका, नबुझेका कोही बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन”, सकी नसकी उनले भनिन्, “मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्छु भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीलाई झन् राम्रोसँग थाहा छ ।”
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसाद हत्याका अभियुक्तमध्येका छविलाल पौडेललाई सर्वोच्चले ६ पुस २०७२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि सरकारले पक्राउ गरेको छैन ।
किटानी जाहेरीमा परेका कतिपयलाई चितवन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले तीव्र दबाबका कारण मुद्दा नै दायर गरेन भने कतिपय मुद्दालाई कमजोर पारिएका कारण अभियुक्त रिहा भए ।
आफूलाई कसैले न्याय दिन नचाहेको र अनेकथरी कुरा गरेर पीडा मात्र बढाएको गंगामाया बताउँछिन् । “सबै हत्याराकै पक्षमा देखिए”, गंगामाया भन्छिन्, “अचेल मैले मानव देख्नै छोडेकी छु ।”
वीर अस्पतालका कामु निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार, अनशनको १९औं दिनदेखि ज्वरो आएपछि गंगामायालाई नसाबाट एन्टिबायोटिक र पोषण (प्यारेन्टल न्यूट्रिशन) दिएर राखिएको छ । नसामा रगत जम्ने समस्या थम्ब्रोसिस देखिएपछि त्यसको औषधि पनि सुईबाट दिइरहेको बताउँदै डा. बस्नेत भन्छन्, “लामो समयदेखिको अनशनले जर्जर बनाएको शरीरलाई नसाबाट दिइएको पोषणले धानिरहन सक्दैन, कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छ ।”
मानवअधिकारकर्मीहरूले १० भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उनका माग पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मानवअधिकारकर्मीहरूको समूहमा रहेका चरण प्रसाईं बताउँछन् । “तर, ८ दिनमा पनि आश्वासन अनुसारको पहल भएको देखिएन”, प्रसाईं भन्छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई पनि बोलाएर अभियुक्त पक्राउ गर्ने बारे चासो राखेको थियो । तर, त्यसको एक सातामा पनि प्रहरी नेतृत्वले अभियुक्त पक्राउ गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको नबुझ्एिको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।
सरकारको यस्तो रवैयाबाट गंगामायाको सामाजिक, न्यायिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकार हनन् भइरहेको उनी बताउँछिन् । “उनको लडाइँ न्यायका लागि हो” अन्सारी भन्छिन्, “न्यायको पक्षमा छु भन्ने सबै नेपालीले उनलाई साथ दिनुपर्छ ।”
छोरा, पति र घरबार सबै गुमाएकी एक महिलाले न्यायका लागि गुहार मागिरहँदा पनि उनका पक्षमा बोलिने स्वरहरू झ्निो हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनले बताइन् ।
बोली बन्द गराउने भए
न्यायका लागि गोरखा र चितवनबाट संघर्ष गर्दा केही सीप नलागेपछि अधिकारी दम्पती बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेको बेला २०६९ सालमा काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि अनशन बसेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले त्यतिबेला पक्राउ गरेर ४९ दिनसम्म थुनामा राखेको थियो ।
प्रहरीले उनीहरूलाई पागल साबित गर्न मानसिक अस्पताल र त्यसपछि हत्कडी लगाएर गोरखा पुर्‍याएर छाड्यो । तर, लगत्तै फर्केका अधिकारी दम्पतीले आफ्ना छोराको हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि अनशन शुरू गरे ।
सरकारले त्यो अनशनलाई ४९औं दिनमा चारबुँदे सम्झैता गरेर टुंग्यायो, तर कार्यान्वयन गरेन । त्यसपछि अनशन बस्ने र तोड्ने शृंखला चल्यो ।
उनीहरूले अनशन शुरू गरेयता पाँचजना प्रधानमन्त्री फेरिइसके । बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीले उनका माग पूरा गर्छौं भने, तर गरेनन् । हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने कुनै आश्वासन दिएका छैनन् ।
गोरखाको फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद (१७) लाई हजुरबुवा भेट्न चितवन झ्रेका बेला २४ जेठ २०६१ मा माओवादी कार्यकर्ताले सुराकीको आरोपमा अपहरण र हत्या गरेका थिए ।
छोरा मारिएकोमा न्याय माग्दा बूढा शव बनेर अस्पतालमा बाकसभित्र बस्नु परेको र अब आफू पनि धेरै नटिक्ने गंगामायाले बताइन् । “त्यसपछि सरकारलाई सञ्चो हुन्छ”, उनी भन्छिन्, “यिनीहरूले न्याय माग्ने सबैको बोली बन्द गराउने भए ।”